MOOC waxay leedahay ujeedooyin dhowr ah:
Marka hore, ka fahamka mabaadi'da falsafada maamulka aadanaha ee ku saleysan qiyamkaaga, ku saabsan qiyamka dimoqraadiyadda ee shirkadda iyo awoodda ay u leeyihiin in ay ku dhaqmaan. Taasi waa, in laga gudbo aragtida aragtida ee dareenka himilada una gudubta codsi la taaban karo oo ku saabsan dhaqanka, dhaqamada iyo hababka koritaanka iyo hagaajinta.
Marka labaad, helitaanka dabagalkaisbeddelka iyo qiimaynta horumarka oo aad ka hirgelin doonto shirkaddaada ama mashruucaaga.
"Maaraynta ganacsigaaga si ka duwan" waxa uu ku siinayaa wax ka badan tababar kaliya.
Waxaanu kugu martiqaadaynaa inaad si degdeg ah u dhaqan galiso waxaad baratay si aad u bilawdo horumar bini'aadantinimo oo cadaalad ah oo ka sii wanaagsan shirkaddaada oo aad saameyn togan ku yeelato bulshada.
Waxaad ka faa'iidaysan doontaa:
Xirfadaha isla markiiba lagu dabaqi karo deegaankaaga,
Barashada internetka ee shakhsi ahaaneed iyo kuwa asaaga ah
Habka dabacsanaan iyo habaysan ee barashada khadka tooska ah kaas oo kuu ogolaanaya inaad qorsheysato helitaanka xirfado cusub iyadoo loo eegayo xaaladaada shaqsiyeed, talaabo talaabo.
Caqabadaha farsamada ee magaalooyinka caqliga leh ee ka qaybqaadashada Diisambar 18, 2021Tranquillus
READ Aasaaska Xogta Weyn
horeSi kala duwan u maamul ganacsigaaga
socdaBaro ku koodka Python